४ राशीका मानिसले आफ्नो जीवनसाथीलाई सधैं जित्ने गर्दछन – Latest News, Video, Entertainment,Health
४ राशीका मानिसले आफ्नो जीवनसाथीलाई सधैं जित्ने गर्दछन
श्रीमान श्रीमातीको वा प्रेमी प्रेमिकाको सम्बन्ध राम्रो बनाउनको लागी एकअर्काको भावना, चाहना र गल्तीलाई सच्याउदै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तर कुनै कुनै मानिसहरु,आफ्नो श्रीमती वा श्रीमानमाथि हक जमाएर आफै बाँठो हु भन्ने स्वाभावका हुन्छन् । प्राय यसरी हक जमाउनेमा केटाहरु नै हुन्छन् । तर अहिले केटीहरु पनि कम छैनन् । आज तपाईलाई यस्तै ४ राशीको बारेमा कुरा गदै छौँ , जुन राशी हुनेहरुले आफ्नो पुरुष वा महिला साथीलाई सधै दबाएर राख्छन् । हेर्नुस् कुन कुन हुन् ?
यो राशी भएको पुरुष वा महिला एकअर्काको कमजोरी नियाल्न एकदमै माहिर हुन्छन् । जसले गर्दा सानो कुरा भेटाएपछि त्यसलाई निहु बनाएर हैकम जमाउन खोजि हाल्ने हुन्छन् । त्यसैले यदि यो राशी भएको जोडी भएमा जीवन चलाउन निकै मुस्किल हुन्छ ।
यो राशी हुने मानिसहरु पनि आफ्नो जोडीलाई सानो सानो कुरामा दबाब दिन निकै सिपालु हुन्छन् । त्यसैले यो राशी भएको जोडीहरुको बेला बेलामा मनमुटाव समेत हुने गर्छ । किनभने यो राशी भएकाहरु मानिसहरु आफ्नो कुरामा मात्र ध्याने अरुको कुरामा खासै ध्यान नदिने स्वाभावका हुन्छन् ।
यो राशी भएका मानिसहरु निकै सोझो र सहयोगी भावना भएका हुन्छन् । तर आफ्नो जोडीलाई दबाब दिने कुरामा भने निकै सिपालु हुन्छन् । किनभने यो राशी भएका मानिसहरु रिसाहा र आफ्नो कुरामा सधै जसरी पनि जित्न तयार हुन्छन् ।
मकर राशी भएका मानिसहरु आफ्नो जोडीलाई आफ्नै हैकममा राख्न एकदमै माहिर हुन्छन् । किनभने उनीहरुको स्वभाव सधै आफ्नै तरिकाले चल्ने हुन्छ । त्यसैले अरुको कुरा नसुनी अरुलाई निकै दबाब दिन्छन् । तर आफ्नो जोडीलाई दबाब दिएपनि माया भने असाध्यै गर्छन् ।
← संसारलाई चकित पार्ने नेपाली क्यान्सर डाक्टर ! के जादु छ उनिमा र विश्वले उनको नाम लिन्छ ?
पाथीभरा मातालाई एक शेयर गर्दै, २०७६ साल असोज ०९ गते गते बिहिबारको राशिफल पढ्नुहोस। →